Uyawaphika wonke amacala uMnu Zuma - Ilanga News
Home Izindaba Uyawaphika wonke amacala uMnu Zuma
Uyawaphika wonke amacala uMnu Zuma
Uthi bazimisele ngokuba lithethwe liphele kulo nyaka
UWAPHIKE walala ngo-mhlane wo-nke amacala abekwe wona owayengume-ngameli wa-kuleli, uMnu Jacob Zuma, obevele eNkantolo eNkulu yase- Mgungundlovu izolo ngoLwesitha-thu.
Ekhuluma nezihlwele zabalandeli bakhe uNxamalala, emuva kokuba icala lakhe lihlehlele umhla ka-19 kuNtulikazi (July), uthe akaza-ni nacala lenkohlakalo ngoba aka-kaze atholwe ngisho nesipeletu so-kwebiwa. Uthi ngisho kuthengwa izikhali zezwe lezi asolwa ngenko-hlakalo ekuthengweni kwazo, wa-yengekho.
“Leli cala lifike laba khona, la-chithwa, labuya futhi, laphinde la-chithwa njengoba seliphinde libu-ya. Sesifuna ukuthi leli cala lifike ekugcineni. Ngiyazi kukhona abebethi ngizoqhamuka namaqhinga okuthi liphinde lihlehle. Nginga-kwenza kanjani lokho ngoba ngifuna liphele ukuze ngiqhubeke ne-mpilo yami,” kusho uMnu Zuma.
UMsholozi ungene enkantolo esegabe ngethimba labameli ebese-lijoyinwe nangu-Advocate Dali Mpofu.
Uqhube wathi: “Kakusekho ma-nje ukubuyela emuva ngoba sifuna ukufika ekugcineni kwaleli cala. Esifike sakusho wukuthi kasifuni li-phathwe yilo mshushisi (uMnu Billy Dawner) olengamele ngoba ukho-hlakele futhi kunezinto eziningi ezi-fakazela ukuthi kudala ezama uku-ngibheca,” kusho uMnu Zuma.
Uveze ukuthi badlule ezigabeni eziningi kakhulu nabameli bakhe, njengoba bephinde bafaka nencwadi ewumqingo ephikisana namacala abekwe wona. Lokhu uthi kukho-mbisa khona ukuthi icala selibheke phambili.
Unxuse abalandeli bakhe ukuba baqinisekise ukuthi bayayifunda le ncwadi ayifake enkantolo, njengoba ethi kuyona kuvela ngisho labo abebemudla izithende, bembophela uzungu lokuba akhishwe esikhu-ndleni ngesikhathi esengumenga-meli. Uthi laba ngabantu abebathe-mbe kakhulu, kwazise babendawonye emzabalazweni.
“Njengoba bekumele ijaji lingi-buze nje, phela sengifundelwe wo-nke amacala engibekwe wona, ukuthi ngiyawavuma noma ngiyawaphika yini, ngiphike ngalala ngomhla-ne,” kusho uMnu Zuma efa yinsini. Ufunge wagomela wathi lo nyaka uzothi uphela necala liyobe liphelile.
“Nginethemba lokuthi umthetho uzodlala indima yawo ngaphandle kokwenzelela,” kusho uMnu Zuma.
Phakathi kwabebekhona ukuzo-kweseka uMnu Zuma, kubalwa uMnu Ace Magashule osamisiwe esikhundleni sokuba ngunobhala jikelele we-ANC, uMnu Sihle Zika-lala uSihlalo we-ANC KwaZulu-Na-tal, uMnu Mdumiseni Ntuli, uMnu Melusi Gigaba, amakhosi akwaZuma eyaseMpendle neyaseNkandla ukukha nje phezulu.
UMnu Zikalala uqinise uMnu Zuma idolo, wathi iyaziwa imisebe-nzi yakhe kule nhlangano.
INATIONAL Prosecuting Authority (NPA), idalule ukuthi izophikisana nesiphakamiso sikaMnu Jacob Zuma sokuba kushenxiswe umshu-shisi emacaleni enkohlakalo noku-khwabanisa abhekene nawo eNka-ntolo ePhakeme yaseMgungundlovu, asenze izolo ngoLwesithathu.
UMnu Zuma owayengumengameli wezwe, ngemuva kokuphika amacala abhekene nawo nenkampani iThales, wenze izethulo nesiphaka-miso sokuba uMshushisi ecaleni la-khe uMnu Billy Downer, ashenxe kuleli cala. Izethulo nalesi siphaka-miso sikaMnu Zuma zifundwe ngabameli bakhe, u-Adv Dali Mpofu obeqala ukubonakala kuleli cala, no-Adv Thabani Masuku.
Ngesikhathi benza izethulo zabo, bakhale ngokuthi uMnu Downer ngeke akwazi ukuba yingxenye ya-leli cala ngoba wazimatanisa nepolitiki ngesikhathi eseka iDA kweli-nye lamacala ayebheke nawo, wa-potshozela ngokungemthetho uda-ba intatheli uSam Sole, waphinde waxhumana nowabe eyisikhulu so- Klebe uLeonard McCarthy, owabe enokuxhumana nezinhloli ze-CIA.
Abameli bakaMnu Zuma banxu-se inkantolo ukuba izithathele phezulu lezi zethulo nesiphakamiso ukuze leli cala liqulwe ngaphandle kokukhetha uhlangothi. Ukuphikisa udaba lokushenxa kukaMnu Dow-ner, okhulumela iNPA uMnu Sipho Ngwema ukhiphe isitatimende edalula ukuthi sebeqashe abameli aba-ne abazobhekana nalesi siphakamiso sikaMnu Zuma.
Uthe laba bameli abaqashiwe ngu-Adv Wim Trengove SC, u-Adv Breitenbach SC, u-Adv Hephzibah Rajah no-Adv Ncumisa Mayosi. Uthe yibona abazobhekana nalolu daba lwesiphakamiso sikaMnu Zuma.
Ekhuluma ngaphandle kwenka-ntolo uMnu Ngwema, uthe umbuso usukulungele ukuqula leli cala eselidonse iminyaka njengoba kulindeleke ofakaza abawu-217. UMnu Zuma ngesikhathi inkantolo imbuza ngala macala, uthe uyawaphika wo-nke kanjalo nenkampani athweswe nayo icala iThales nayo iwaphikile amacala ebhekene nawo.
Kulindeleke ukuba abameli ba-kaMnu Zuma nabashushisi baxhumane ngaphambi kokubuyela kwa-leli cala enkantolo ngoNtulikazi (July). Phakathi enkantolo kuvele ukuthi uMnu Zuma waqala ukuthola umgwazo kuMnu Schabir Shaik kusukela ngo-1995 kuya ku-2005 olinganiselwa ku-R4.7 millon.
UMnu Zuma usamile ekutheni usola inhlese yezepolitiki ngaleli cala, njengoba ethi laphekwa ngabathile ababenezinhloso ezimbi ngaye.
Previous articleBelisongelwa ngokufa iphoyisa elibulawe ngoyaba lwezinhlamvu
Next articleIsikhulu se-Pirates sichitha eka-Hunt